China Connector စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Donghuan
ဖုန်း : 86-0311-85301359
Air Hose Couplings များ
Air Hose Couplings EU အမျိုးအစား
နှစ်ချက် Bolt Clamps
Tube clamps များ
Conduit Fittings များ
Malleable Iron Pipe Fittings များ
Das Meter suivel အော့ဖ်ဆက်များ
Double Wires House Clamp
Gas Meter suivel အော့ဖ်ဆက်များ
မီတာ Suivel အော့ဖ်ဆက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် 2012 ခုနှစ်မှစတင်၍ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အစပိုင်းတွင် ပျော့ပြောင်းနိုင်သောသံဖြင့် (LL,LR, LB,T) အပါအဝင် conduit body များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အခြားပစ္စည်းများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ပါသည်။ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် lugs၊ union၊ enlarger၊ close nipple၊ drain breather၊ cover၊ aluminium lugs စသည်တို့ကို lugs ပါရှိသော lt connector၊ lt connector ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ အစပိုင်းတွင် black sand mold ကိုအသုံးပြုပြီး၊ အဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါပြီ၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အဝါရောင်သဲဖြင့် မှိုအသစ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ ချည်ကို CNC စက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ယခုကျွန်ုပ်တို့ အဓိကပြုလုပ်သော မျက်နှာပြင်သည် လျှပ်စစ်ဖြစ်ပြီး၊ ပထမဦးစွာ လျှပ်စစ်ထက်တွင် ပူပြင်းသော သွပ်ရည်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ပစ္စည်းအသစ်အတွက် မှိုဖွင့်ရန် အတွေ့အကြုံရှိသူများလည်းရှိပါသည် စိတ်ပါဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဝိုင်ယာကြိုးဆွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ပြိုင်ကားလမ်းကြောင်းအတွင်းပိုင်းသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည့် ပြွန်ကိုယ်ထည်များကို အသုံးပြုသည်။ဖြောင့်တန်းသောပြွန်ပြေးများ၊ အကိုင်းအခက်ပြွန်ပြေးခြင်းနှင့် 90° ကွေးခြင်းတို့ကို ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုသည်။ပိုက်လိုင်းများ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သမဂ္ဂ သို့မဟုတ် အရံအတားများ သို့မဟုတ် အခြား စက်ပစ္စည်းများသို့ ပြွန်များ လည်ပတ်ခြင်း စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည့် သမဂ္ဂသည် အနာဂတ်တွင် အသုံးပြုခွင့်နှင့် စနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းအား ခွင့်ပြုသည်။
ထုတ်လုပ်သူအမည် အရွယ်အစား အထုပ်
LUGS မပါဘဲ LT ချိတ်ဆက်သူ ၃/၄ သေးငယ်တဲ့သေတ္တာထဲမှာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပုံးထဲမှာ
LUGS မပါဘဲ LT ချိတ်ဆက်သူ 1 သေးငယ်တဲ့သေတ္တာထဲမှာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပုံးထဲမှာ
LUGS မပါဘဲ LT ချိတ်ဆက်သူ ၁-၁/၄ သေးငယ်တဲ့သေတ္တာထဲမှာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပုံးထဲမှာ
LT ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ ၃/၄ သေးငယ်တဲ့သေတ္တာထဲမှာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပုံးထဲမှာ
LUGS ဖြင့် LT ချိတ်ဆက်ပါ။ 1 သေးငယ်တဲ့သေတ္တာထဲမှာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပုံးထဲမှာ
1.Bodies---Malleable သံဖြင့် electrogalvanized
3.Cover---Malleable သံ သို့မဟုတ် ကာဗွန်သံမဏိ
4.Cover Screws---Stainless သံမဏိ
5. အရွယ်အစား- 3/4''-2''
6. ကြိုး- NPT
7. စည်းမျဥ်းများ ငွေပေးချေမှုများ- မထုတ်လုပ်မီ TT 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများနှင့် B/L မိတ္တူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လက်ကျန်ငွေကို USD ဖြင့် ဖော်ပြထားသော စျေးနှုန်းအားလုံး၊
8. ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- ထို့နောက် Pallet များပေါ်တွင်ပုံးများထဲတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
9. ပေးပို့သည့်ရက်စွဲ- 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 60 နှင့် နမူနာများကို အတည်ပြုခြင်း၊
10. ပမာဏသည်းခံမှု- 15%။
ယခင်- Tube clamps များ
အထူးအသားပေး ထုတ်ကုန်များ, ဆိုက်မြေပုံ
အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, လျောက်ပတ်တယ်။, American Standard Fittings များ, Hinged Pipe Clamp, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, Hose With Coupling,
လိပ်စာ- Nanshijiazhuang နိုင်ငံ၊ Xizhaotong မြို့၊ Chang'an ခရိုင်၊ Shijiazhuang မြို့၊ Hebei၊ တရုတ်။
Casting Coating မိတ်ဆက်ခြင်း။
Casting coating သည် အရန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
Shijiazhuang Donghuan ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံသွန်း...
ဒီနေ့ မင်းကို Donghuan Mallea ကို ခေါ်သွားမယ်။